♪ FACEBOOK မှာ GIF တွေဘယ်လို တင်မလဲ ♫ ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
Font and Keyboard
Only Thai News
♪ FACEBOOK မှာ GIF တွေဘယ်လို တင်မလဲ ♫
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Thursday, March 31, 2016 Android No comments
GIF ဆိုတာကလည်း လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာတွေမှာ ခေတ်စားနေတဲ့အထဲ မပါမဖြစ်ပါပဲ။ အရင်တုန်းက ကျွန်တော့်အနေနဲ့ GIF တွေဘယ်လိုလုပ်ရမယ်။ ဘယ် Apps တွေသုံးရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတကို ရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် GIF တွေအလွယ်တကူပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာတွေအပေါ်တင်ချင်ရင် ဘယ်လိုတင်ရမယ်ဆိုတာက လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါကလည်း သိပ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်။ ဒီ Article မှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ GIF လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာတွေပေါ် တင်ပုံတင်နည်းကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
၁) ပထမဆုံး အဓိကလိုအပ်တာကတော့ သင်လူမှုကွန်ယက်မှာတင်မယ့် GIF ပါပဲ။ ဒါကတော့ အခြေခံလိုပါတယ်။ သင့်စက်ထဲမှာ GIF တစ်ခု အဆင်သင့်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၂) အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ သင့် Browser ထဲကိုဝင်ပြီး giphy.com ဆိုတဲ့ Website တစ်ခုထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ပြီးသွားရင် သင့်အနေနဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားလောက်မှာ Log In ဆိုတဲ့ ကလစ်လေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါလေးကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ။
၃) ကလစ်လုပ်လိုက်ရင် အောက်ပါအတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ Register လုပ်ဖို့လိုအပ်လို့ ဘာနဲ့လုပ်မလဲလို့ မေးတာပါ။ Log In With Facebook ဆိုတာကိုပဲ နှိပ်လိုက်ပါ။
၄) အဲ့ဒီအခါ သင့်Facebook အကောင့်နဲ့လုပ်လိုသလားလို့ မေးမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ Password ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး Save နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်။ Success ဆိုပြီးပြပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် ရပါပြီ။
၅) Log In လုပ်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားရင်တော့ ပုံကို Upload လုပ်ဖို့အပိုင်းရောက်ပါပြီ။ အပေါ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Upload ဆိုတာလေးကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ။
၆) အဲ့ဒီအခါအောက်ကပုံအတိုင်း Box တစ်ခုကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ တင်လိုတဲ့ GIF ကိုရွေးချယ်ရမှာပါ။ Browse ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Browse ကိုနှိပ်လိုက်ရင် GIF ရှိတဲ့ File ကိုရွေးချယ်ပြီး သင်တင်လိုတဲ့ GIF ကို ဖွင့်ရမှာပါ။
၇) ဖွင့်လိုက်ရင် အောက်က Box ကျလာမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ ကြက်ခြေခတ်အနီလေးပြထားတဲ့ဘေးမှာ File Name ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအောက်က “Enter Tags Separated by commas” ဆိုတဲ့ နေရာမှာ File အတွက် နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Upload GIF ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၈) အဲ့ဒီအခါမှာ Upload လုပ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ပြီးသွားရင် သင်ရွေးလိုက်တဲ့ GIF လေး Website မှာတက်နေတာတွေ့ရမှာပါ။ ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။ အဲ့ဒီအောက်ဖက်လေးမှာ သင် Share ပြုလုပ်လိုတဲ့ လူမှုကွန်ယက် Website တွေရဲ့ icon လေးတွေရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ Facebook တင်မဟုတ်ပဲ၊ Twitter, Instagram, Tembler စတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အစုံမှာ Share လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Facebook မှာပဲ Share လုပ်လိုက်ပါတယ်။
၉) Facebook icon ကိုနှိပ်လိုက်ရင် သင်အကောင့်ထဲမှာ GIF ရဲ့ Link နဲ့အတူ သင်စာရေးလိုတဲ့ အကြောင်းအရာရေးထည့်ပြီး ပုံမှန် Post တင်သလိုပဲ Share လုပ်လိုက်ရင် GIF လေးသင့် Time Line မှာ တက်သွားပါပြီ။
ကဲ.. ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ။ ဒီအပေါ်က ပြခဲ့တဲ့ အဆင့်တွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ရင်း သင်တို့အနေနဲ့ လွယ်ကူချောမွေ့စွာပဲ GIF တွေကို သင့် Time Line မှာတင်လို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ GIF တွေလုပ်ပုံလုပ်နည်း လေးတွေသိချင်ရင်တော့ အောက်ကပြထားတဲ့ Link လေးတွေ ကလစ်လုပ်ရင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Android ဖုန်းများတွင် GIF လုပ်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံး Apps များ
PC/Laptop နှင့် GIF လုပ်ပုံလုပ်နည်း
Credit to ==> Digital Times
WINDOWS 10 ကို မြန်မာစာမှန်အောင် FONT & ကီးဘုတ် ထည့်သွင်းနည်း
Windows 10 မှာ နေရာတိုင်းလိုလို မြန်မာစာမှန်စေမဲ့ Font နဲ့ Zawgyi ကီးဘုတ် သွင်းနည်းကို ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ေ...
WINDOW 10 မှ VIBER နှင့် မြန်မာစာ
Window 10 မှ Viber မြန်မာစာမမှန်လို့ပါဆိုပြီး မေးေ မးနေကြလို့ အဆင်ပြေတဲ့ Myanmar Font လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ စမ်းသပ်မိသလောက်တော့ ဒီ...
WINDOW7ကနေ WINDOW 10 အထိ ACTIVATE လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ RE-LOADER V2.2 ACTIVATOR (LATEST VERSION)
Re-Loader ကတော့ .... ထွက်ရှိသမျှ Activator တွေထဲမှာ အရမ်းကို ကောင်းမွန်ပြီး ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေတဲ့ အကြိုက်ဆုံး Activator တစ်ခုပါပဲ... ...
♪ Frozen ရောင်စုံ မြန်မာ ကီးဘုတ်များ (Color Frozen Keyboard) ♫
ခုတစ်ခေါက်ကတော့ Frozen Keyboard ကို Color လေးတွေနဲ့ သုံးချင်တဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်ပါ Color Frozen Keyboard မှာ Color (5)မျိုးနဲ့ J...
OPPO Neo7(A33w) Firmware & Flash Tools
OPPO Neo7(A33w) Firmware လေးကို တောင်းထားကြတဲ့ သူတွေ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Flash Tools ဖြင့် အလွယ်ဆုံး Firmware ရေးသားရမှာ ဖြစ်ပါ...
Microsoft Office 2016 Pro Plus v16.0.4498.1000 Actived + Portable March 2017
Download Microsoft Office 2016 Pro Plus v16.0.4498.1000 Actived + Portable March 2017 Free | Microsoft Office 2016 Pro Plus v16.0.4498.100...
True Smart MAX 4.0 Unlock Sim
Download True Smart 4.0 Firmware & Sim Lock File Learn How To Flash True Smart 4.0 From here True Smart MAX 4.0 Unlock ...
Samsung Full Firmwares | 4Files Firmwares
Samsung Full Firmwares | 4Files Firmwares (PDA,AP,Modem,Phone,CP,BL,Bootloader,CSC,PIT Files) Firmware Galaxy S Boxes Brazils ...
Download Firmware, CWM/TWRP, ROMs, SP Flash Tool, Scatter Acer Liquid Z/E/S/M Series
Acer Liquid Z Series Acer Liquid Z1 (Z110) Download SPFT Firmwares Firmware - Acer_AV023_Z110_1.006.00_WW_GEN1S.zip Firmware - ...
Samsung New Security Frp Lock Remove Solution အပြည့်အစုံ Videos tutorial
မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့တော့ Samsung New Security Frp Lock Remove Solution ကောင်းလေးကို ဘာသာပြန်ပြီး တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစား၍ ၀ါသနာတူ ဘောဒါမျ...
AOTO firmware (1)
Ascend P7 (1)
Ashinein Kura (1)
Attila P8 Plus Display Fix (1)
Automatic Call Recorder (5)
Blackberry Flashing Tool (1)
BlubooXthouch Root (1)
BlubooXthouch TWRP Recovery (1)
Bootloader Unlock (3)
CD/DVD Drive Error (2)
Google Nexus Root (3)
Infinix Note2 (1)
KKP firmware (3)
Letv Le 1 Pro TWRP (1)
Marshmall Root (15)
Marshmallow 6.0 (16)
Micromax Android (2)
Miracle Box (2)
Motorola Moto X 2013Verzonon (1)
MTK Backup (3)
NoBootable Device Error (2)
Note3 Root 5.0 N9005 (1)
OnePlus X (2)
OnePlus X Root (1)
Ooredoo Firmware (1)
OS XP (1)
OS10 64 (3)
OS10 86 (2)
OS7 64 (4)
OS7 86 (3)
OS8 86 (1)
OS8.1 64 (2)
OS8.1 86 (2)
Redmi Note3 Marshmallow 6.0 (1)
Service Box (8)
Sim Unlock (6)
Vital Firmware (1)
Xiaomi Mi5Recovery Mode (1)
Xiaomi Redmi Note 3G Unbrick (1)
Xposed Installer (1)
တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် တစ်ယောက် (1)
လအလိုက် ပွဲတော်များ (1)
▼ 2016 (2263)
♪ မြန်မာငွေ ၁ သိန်း ၇ သောင်းဝန်းကျင်နဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်...
ဖုန်းကို CCTV လျှိ့ဝှက်ကင်မရာ လေးနဲ့ချိတ်ပြီး တိုက...
ဖုန်းမှာ ဂစ်တာ ကော့စ်တွေ ရှာနိုင်ပြီး ကော့စ်တွေ ဖန...
Honor6ဖုန်းကို Malaysia firmware Marshmallow တင်...
Galaxy S6 Edge plus ဖုန်း ဗားရှင်း Marshmallow ကို...
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531H ဖုန်းဗားရှင်း ...
♪ “MECTEL CDMA 800 ဆင်းကတ်အသုံးပြုသူများ ၃ဝဝဝ ကျပ်...
♪ APPLE IPHONE SE ♫
Samsung Galaxy A7 All Models ဗားရှင်း Android 5.0....
Infinix Note2X600 ဖုန်းကို Android 6.0 Marshmall...
♪ Huawei ဖုန်းဝယ်ယူပါက တရားဝင်ထုတ်ကုန် ဟုတ်၊ မဟုတ်...
Smarty Uninstaller 4.4.1 Full Version
Wondershare Data Recovery5Full Version
ဖုန်း စပိမြန်ဆန် သွားစေမယ့် C LAUNCHER
♪ သင့်ရဲ့ ANDROID DEVICE နဲ့ IPHONE မပျောက်ဆုံးခင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် အစိုးရသစ် ၀န်ကြီးများ က...
စင်ကာပူရောက် မြန်မာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ နေရပ်ပြ...
“SAMSUNG GALAXY A7 (2016)”
လွမ်းရယ်မပြေဘူးကွယ် ဆွေးလေသမျှ ဝေးနေခဲ့ရတဲ့ ဆင်းပု...
Vocabulary ( Color )
Vocabulary ( Cardinal Number )
Vocabulary ( Religion )
ဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့ပတ်သက်သော အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ်မ...
ကျောက်မျက်ရတနာများနဲ့ ပတ်သက်သော မီးနင်းများ
ဧည့်ခန်းနဲ့ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများ
Vocabulary ( Taste )
English Spoken Pattern 20
English Spoken Pattern 19
English Spoken Pattern 18
English Spoken Pattern 17
English Spoken Pattern 16
English Spoken Pattern 15
English Spoken Pattern 14
English Spoken Pattern 13
English Spoken Pattern 12
YouTube AdAway v3.1.2 APK
မြန်မာဇာတ်ကားများ၊ ဓမ္မတရားတော်များ၊ သတင်းတွေကို ဖု...
PC user တွေတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ - Adobe Flash Pla...
မြန်မာလူငယ်များအတွက် ၃၈ -ဖြာမင်္ဂလာ 38PhyarMingalar ...
ဖုန်းထဲ့မှာပင် နိုင်ငံတကာ ငွေ Change နှုန်းအတိုင်း ...
ဘာသာစကားအမျိုးပေါင်း ၉၀ကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးနို...
မြန်မာနိုင်ငံက စာရေးဆရာတွေ့ရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲအသံဖု...
ဖုန်းထဲ့ကနေ သရဲ့ ပုံပြင် မြောက်များစွာကို မြန်မာလု...
ကျန်းမာရေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ သင်္ခန်းစာတွေကို မြန်မာလို့ေ...
မြန်မာ အချက်အပြုတ် မျိုးစုံတွေကို ဖုန်းထဲ့မှာသေချာ...
အလွယ်ဆုံးလေး အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာမယ် နိုင်မယ့် Myanmar ...
မြန်မာ လူငယ်များအတွက် လေ့လာသင့်တဲ့ သင်္ခန်းစာလေးတွေ ...
ဗေဒင်ပညာ ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မိမိဖုန်းထဲ့ကနေ အလွယ...
ဖုန်းထဲ့ကနေ မြန်မာ အချစ်ကဗျာများကို အလွယ်ဆုံး ဖတ်ရ...
ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတွေအတွက် မြန်မာ တရားတော်များ ကို စ...
ဖုန်းထဲ့မှာ ရှိနေသမျှ Antivirus တွေကို Scan ပြီး အ...
Root လုပ်ထားပြီးသား ဖုန်းများ၏ SD Card ကို အကောင်း...
YouTube ပေါ်က သီချင်း ဗီဒီယို အားလုံးကိုိ Format အမ...
လျှိ့ဝှက် ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ ဖုန်းကင်မရာလေး - Secret...
Xiaomi Redmi Note3Pro ဖုန်း ဗားရှင်း Android 5.1...
Amazon Kindle Fire 4th Gen 2014 Tab အတွက် ဗားရှင်း...
Lenovo Phab Plus PB1-770M Tab အတွက် ဗားရှင်း Andro...
ကိုယ့် PROFILE ကို ဘယ်သူဝင်ကြည့်ထားလဲဆိုတာ ဖေါ်ပြပေ...
MAGIX PHOTO MANAGER 16 DELUXE V12.0.0.20 FULL (304...
နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း Android N 7.0 ဗားရှင်းကို S...
"ထိုင်းရောက်လုပ်သားများအတွက် မြန်မာဘက်မှ အထောက် အထ...
ကျိုက္ခမီ သုဿန်ဝင်း အောက်ဘက်စည်းကမ်းမရှိသော စည်ပင် ...
သူငယ်တန်း မူကြို သင်မဲ့ ဆရာမများအတွက် Ok?
ကျိုက္ခမီမြို့ ဘဲကုန်း အ.မ.က စာသင်ကျောင်းရှေ့ ဘုရား...
iExplorer 3.9.2.0 Full Version
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၁၈ ဦး၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အကျဉ်း
COMPUTER WINDOW ပြန်မတတ်နိုင်တဲ့အခါ
Miracle Crack 2.14 ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.
ကျိုက္ခမီ ရေလယ်ဘုရား စောင်းတန်း ဓါတ်လှေကား ဖွင့် ပွ...
iPhone & iPad များတွင် iCloud ၀င်ထားခြင်းရှိ မရှိစ...
Lock ကျသွားတဲ့ Facebook Account ကို ပြန်လည် ရယူဖို...
တိမ်စိုင်တိမ်လွှာတိုင်းမှာ ငွေရောင် အနားသတ်မျဉ်းတစ်...
အင်္ဂလိပ်စာလုံးများကို word stress (ဖိ၍ရွတ်သံ) မှန်ခ...
အသုံးဆန်း (Idiom) လေးများနဲ့ စကားပြောပုံများ (၂၀)
"Easy To Say "
ကျွန်တော် လူဆိုး ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိက တရားခံက ကျွန်ေ...
"Nobody , Everybody , Someone တို့နှင့်ပတ်သက်၍ လေ့...
ဆိုင်ကယ်ဖြင့် အိမ်လိုက်ပို့သူက အဓမ္မပြုရန်ကြံစည်မှု ...
မြန်မာအမျိုးသမီးအား ထိုင်းလူမျိုးတစ်ဦးမှ အဓမ္မပြုက...
ဘရာဇီး ဘောလုံးသမား နေမာ အခွန်တိမ်းရှောင်မှုအတွက် အေ...
မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံ နေ့ စဉ် သတင်းစာ
မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ...
မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့ ထုတ် Reporter News Journal Vol-1 ...
မိုဘိုင်းဖုန်းအခွန်ငွေ ၅ ရာခိုင်နှုန်း (ရုပ်/သံ)
တရုတ်ငွေကြေး ကျဆင်းမှုကြောင့် မန္တလေးပဲဈေး ကျဆင်းနေ...
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ် သင်္ချာနှင့် စာရင်းအင်း ကျောင်းသ...
လာရောက်ရေကစားသူများနှင့် အမြဲတမ်းစည်ကားနေတဲ့ စက်စဲ...
Vocabulary ( Job )
Vocabulary ( Trees )
► 2015 (1447)
ဖုန်းအတွက်ကျိုက္ခမီဆော့လ်ဝဲ ကျိုက္ခမီမြို့စာကြည့်တိုက် 1 ကျိုက္ခမီမြို့စာကြည့်တိုက်2ကျိုက္ခမီမြို့အကြောင်းနှင့်နည်းပညာ
Copyright © ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး | Powered by Blogger
Blog Admin by Linnaingoo